China Fithem ks-016 Wireless stereo neckband bluetooth Chip 5.0 fanatanjahan-tena headphone mpanamboatra sy mpamatsy | Kaiwansi
1. fampidirana vokatra ks-016
Ny fiainana bateria matanjaka amin'ny enta-mavesatra tokana Nano absorption nano nano handà ny fonosana Bluetooth 5.0 fampitana haingana 3D audio sy fifaliana fihainoana Ny rafitra bateria roa dia afaka milalao mandritra ny fotoana lava, manaitaitra mozika maso tsy misy fatiantoka.
3. Ks-016 endri-javatra sy fampiharana
Ny famolavolana haingam-pandeha dia mampihena ny olana amin'ny hovitrovitra, ny malefaka ambany kokoa dia marefo kokoa, ny feon'olombelona dia tsara kokoa, mankafy ny hatsaran'ny mozika. , ary mamerina ny feon-kira mamiratra amin'ny mozika, feno ny refin'ny Medium, matevina ary malefaka ny matetika ambany.
4. antsipirian'ny vokatra Ks-016
Ny tadin'ny hatoka fahatsiarovana dia miovaova sy miolakolaka. Ny vozon'akanjo dia vita amin'ny silika ara-pahasalamana ara-pitsaboana, izay malefaka toy ny hoditry ny zazakely, mafana sy mahazo aina, milamina ary azo antoka. Afaka ampangaina amin'ny segondra ary manana fiainana bateria mahery. Ny naoty rehetra dia madio sy madio.
5. Ny antsipirian'ny bass rich, ny refes matetika dia misolo tena tsara, ary ny Mezzo manankarena, tena tsara. Ny fandidiana tsotra ny fanaraha-maso afovoany dia mahatonga ny mpampiasa hahatsapa ho mora ampiasaina ihany koa, ny kalitaon'ny feo dia mitana ny laharana 10 ihany koa amin'ny indostria iray ihany, ny herinaratra dia 110mAh afaka mandefa bateria 12 ora ihany koa dia azo antoka, ny vokatra koa dia misy fepetra toy izany amin'ny maha garantie anao dia tongasoa ianao hanontany sy hividy.
Manaraka: Fithem ks-020 bluetooth wireless earphone boss boat Leisure headphones fanatanjahan-tena
Fithem Ks-009S Bluetooth Wireless Waterpr ...